နှင့်အတူ Romantic Suites
✅2ပုဂ္ဂိုလ်ရေး Jacuzzi
✅ Royale Suite၊
Fletcher Whirlpool Deluxe Suite Wageningen Gelderland ၌ 2021
✅ Luxe Suite၊
Fletcher Jacuzzi Suite Landgoedhotel Renesse Zeeland ၌ 2021
Z Zeeland တွင်
ကြီးမားသော XL Jacuzzi ပါသောအပိုဇိမ်ခံအခန်းများ
နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်ဤအရာများအလွန်နည်းသည်, ဒါကြောင့်မြန်မြန်လေး booking လုပ်လိုက်ပါ!
တွေ့ဆုံခဲ့သည် အပို မိုက်တယ် သီးသန့် Jacuzzi
အရသာရှိသောနံနက်စာအပါအ ၀ င်
OP = OP: အနည်းငယ်သာရရှိနိုင်သည်!
Hotels.nl Jacuzzi အခန်းများ
Jacuzzi အခန်းများကိုကြည့်ပါ >
van der Valk Jacuzzi အခန်းများ
ဖလက်ချာ Jacuzzi Suites
ဖလက်ချာဟိုတယ်တွေက Jacuzzi နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်, ရေပူစည်သို့မဟုတ်ဝှီပုတ်
မင်းသိလား ဖလက်ချာဟိုတယ် အထူးဇိမ်ခံကွဲပြားခြားနားသောဟိုတယ်အခန်းနှင့်အခန်းများတွင်နှစ်ထပ်ဂျက်ဇီစီတပ်ဆင်ထားသည်, ချစ်စရာကောင်းတဲ့ bubble ရေချိုးသို့မဟုတ်သာယာသော whirlpool?
အခန်းတွင်းရှိဂျက်ဇီတပ်ဆင်ထားသည့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကျန်းမာရေးအငယ်တန်း suite တွင်သင်နှစ်ယောက်ကိုသာဖြေလျှော့ပါ, အချို့သော suites များတွင်သီးသန့်ကျန်ရှိသောလှေကားထစ်များနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်းများရှိသည်, သင်အထူးနေ့ချင်းညချင်းနေထိုင်ရန်အာမခံထားသည်.
အခန်းတွင်းဇိမ်ခံပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည့်အခန်းရှိဂျက်ဇီတီဟိုတယ်တစ်ခုသည်သင်၏အလုပ်များသောရက်သတ္တပတ်များပြီးနောက်အပြီးသတ်အနားယူခြင်းဖြစ်သည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြု Fletcher Jacuzzi အခန်းများ
Fletcher Jacuzzi Executive Terrace Suite Nijmegen Gelderland ၌ 2021
✅ V ။.
ac jacuzzi ပါသောဇိမ်ခံရေချိုးခန်း
igen Eigen riant terra m ...
ပေါင် ၄၇.၀ မှ.
irl ပတ် ၀ န်းကျင်
✅ Deluxe နှစ်ထပ် ...
✅ Kingsize အိပ်ရာ
သို့မဟုတ်အောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်၍ ဂျက်ကတ်စ်သို့မဟုတ်ဝှိုက်လ်ပ်ပါလ်ရှိဖလက်ချာဟိုတယ်မှကမ်းလှမ်းမှုအားလုံးကိုကြည့်ပါ.
Fletcher Hotels ကိုကြည့်ပါ >
ချွေးပေါင်းအိမ်နှင့် Jacuzzi ပါသောဟိုတယ်များ
အခန်းတွင်းသီးသန့် Sauna နှင့် Jacuzzi: ဒီလောက်ဇိမ်ခံပစ္စည်း!
နောက်ထပ်တစ်လှမ်းသွားပါ, သူစိမ်းတွေမပါဘဲအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့ကျန်းမာရေးအတွေ့အကြုံအတွက်မင်းအခန်းထဲမှာသီးသန့် jacuzzi နဲ့ private sauna ပါ ၀ င်တဲ့ဇိမ်ခံဟိုတယ်တစ်ခုမှာဇိမ်ခံဟိုတယ်တစ်ခုဖွဲ့ပါ။.
Sauna အခန်းများကိုရှာဖွေပါ >
ဗန် der Valk Jacuzzi အခန်းများ
လူသိများသောဟိုတယ်ကွင်းဆက် Van der Valk တွင်အခန်းကျယ်၌သီးသန့်ကြီးမားသောဂျက်ကတ်ပါသောဇိမ်ခံဟိုတယ်များစွာကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်, ချစ်စရာကောင်းတဲ့ပူဖောင်းရေချိုး, ချောင်းဆိုး, ကျန်းမာခြင်းနှင့်ကြီးမားသောပတ်ပတ်လည်ဂျacuzziနှင့်အတူသင့်ရဲ့အခန်းတစ်ခန်းအတွက်ပုဂ္ဂလိကရေကူးကန်.
အောက်ပါခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးအကောင်းဆုံး van der Valk ကမ်းလှမ်းချက်များကိုကြည့်ပါ.
Vd Valk Rooms များကိုကြည့်ပါ >
Inntel Art ဟိုတယ် Jacuzzi အခန်းများ
Inntel ဟိုတယ်များသည်သူတို့၏အံ့သြဖွယ်ပူဖောင်းရေချိုးခန်းကြောင့်လူသိများသည်, ရေကန်နှင့် jacuzzi အခန်းများ.
အလှဆုံးပူဖောင်းရေချိုးခန်း 2021 ဥပမာအားဖြင့်၎င်းသည်သင်တွေ့ရသောအရာမဟုတ်ပါ Inntel Art ဟိုတယ် Eindhoven.
Klik op de knop hieronder en ontdek deze bijzondere hotelketen met prachtige hotelkamers met uitgebreide aandacht voor jacuzzi op de kamers en spa / Inntel ၏ဂျက်လေယာဉ်နှင့်အတူဟိုတယ်အတွင်းကျန်းမာရေးအဆောက်အ ဦ.
Hot Tub နှင့်အတူတစ်ညအိပ်
သင့်ရဲ့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာတစ် ဦး ချစ်စရာကောင်းတဲ့နွေးပူစည်ပိုင်း, မင်းတို့နှစ်ယောက်ကနွေးတဲ့ရေကိုခံစားနိုင်တဲ့နေရာ!
Hot Tub Rooms များကိုကြည့်ပါ >
Fletcher မှာ In-Room Jacuzzi ဘွတ်ကင်လုပ်ဖို့ဘယ်လို?
အောက်ဖော်ပြပါရွေးချယ်ထားသောဂျက်ကတ်နှင့်အတူဖလက်ချာ့ဟိုတယ်များတွင်ဟိုတယ်အခန်းများနှင့်ဂျက်စီရီနှင့်အတူအစုံလိုက်ရှိသည်, အခန်းထဲမှာ whirlpool သို့မဟုတ် whirlpool.
ဤဟိုတယ်များသည်လှပသောနေရာတွင်ရှိနေပြီးအခမဲ့ကားရပ်နားရန်နေရာနှင့် Wi-Fi အခမဲ့ရရှိနိုင်သည်.
Jacuzzi ခန်း Gelderland
ဖလက်ချာအိမ်ခြံမြေဟိုတယ် Holthurnsche Hof
ဖလက်ချာဟိုတယ် - စားသောက်ဆိုင်ရေကြောင်းရပ်ကွက်
ဖလက်ချာဟိုတယ် - စားသောက်ဆိုင် Jan van Scorel
ဖလက်ချာဟိုတယ် - စားသောက်ဆိုင် Heiloo
ဖလက်ချာဟိုတယ် - စားသောက်ဆိုင် Marijke
ဖလက်ချာဟိုတယ် - စားသောက်ဆိုင် Spaarnwoude
ဖလက်ချာဟိုတယ် - စားသောက်ဆိုင် Koogerend.
Brabant ရှိ Jacuzzi အခန်းများ
ဖလက်ချာ Kloosterhotel Willibrordhaeghe
ဟိုတယ် - စားသောက်ဆိုင် Teugel Uden-Veghel
ဖလက်ချာကျန်းမာ - ဟိုတယ် Trivium.
ဖလက်ချာစီးတီးဟိုတယ် The Hague
ဖလက်ချာဟိုတယ် - စားသောက်ဆိုင် Carlton.
Jacuzzi အခန်းများ Zeeland
ဖလက်ချာ Zuiderduin သဲသောင်ပြင်ဟိုတယ်
Jacuzzi အခန်း Drenthe
ဖလက်ချာဟိုတယ် - စားသောက်ဆိုင် De Zeegser Duinen
ဖလက်ချာကျန်းမာရေး - ဟိုတယ် De Hunzebergen
Jacuzzi အခန်းများ Utrecht
Fletcher ဟိုတယ်-စားသောက်ဆိုင် Amersfoort
Limburg Jacuzzi အခန်းများ
Jacuzzi အခန်းများ Groningen
Fletcher မိသားစုဟိုတယ် Paterswolde
Jacuzzi အခန်းများ Friesland
Fletcher ဟိုတယ် -Paleis Stadhouderlijk Hof
Jacuzzi Video Impression နှင့်အတူအခန်း
ထို့နောက်သင့်အားဟိုတယ် jacuzzi (သို့) အခန်းထဲရှိရေပူကန်၌စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပါစေ.
ဟိုတယ်များသည်မကြာခဏဆိုသလိုအမျိုးမျိုးသောကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကိုပေးသည်, သို့မှသာသင်၏ဟိုတယ်တည်းခိုနေစဉ်ဟိုတယ်၏ချွေးပေါင်းအိမ် (သို့) ရေနွေးငွေ့ရေချိုးခန်း၌အပြည့်အဝအနားယူနိုင်သည်.
သီးသန့် Jacuzzi ဖြင့်ဟိုတယ်အခန်းကိုအဘယ့်ကြောင့်ယူထားသနည်း?
အားလပ်ရက်အပန်းဖြေခရီးအတွက်သဘာဝတရား၏အလယ်တွင်ရှိသောဟိုတယ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ, သင်ဈေးဝယ်ထွက်ပြီးတစ်နေ့၌ jacuzzi ၌အပန်းဖြေနိုင်ရန်လူစည်ကားသောမြို့တစ်မြို့တွင်ဟိုတယ်တစ်ခုကြိုတင်မှာယူပါ.
အခန်းထဲမှာ jacuzzi ပါတဲ့ဟိုတယ်တစ်လုံးမှာအဲဒီ့အပိုဇိမ်ခံပစ္စည်းလေးတွေကိုခံစားနိုင်ပါတယ်, ၎င်းသည်အပန်းဖြေမှုကိုသေချာစေသည်.
ဟိုတယ်ပတ် ၀ န်းကျင်၌ကောင်းသောနေ့တစ်နေ့ကိုဖြတ်သန်းပါ, ဟိုတယ်စားသောက်ဆိုင်တွင်အရသာအရှိဆုံးဟင်းလျာများကိုမြည်းစမ်း။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဟိုတယ်အခန်းရှိ jacuzzi ၌အနားယူပါ.
jacuzzi ပါတဲ့ဇိမ်ခံခန်းတွေရှိတယ်ဆိုတာမင်းသိလား. အဲဒါပါတီပွဲဘဲ.
Jacuzzi အခန်းအားလုံးကိုကြည့်ပါ >
Bubble Bath နှင့်အတူ Van der Valk ဟိုတယ်, အခန်းထဲတွင် Whirlpool သို့မဟုတ် Jacuzzi
ထို့နောက်သင် Van der Valk ၌မှန်ကန်သောနေရာကိုရောက်ခဲ့သည်.
ငါတို့ရဲ့ဟိုတယ်တော်တော်များများမှာသူတို့မှာ jacuzzi နဲ့အထူးအခန်းရှိတယ်.
အခန်းတစ်ခန်းတွင် jacuzzi ပါ ၀ င်ပြီးစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ခံစားပါ, ပတ် ၀ န်းကျင်သို့မဟုတ်ပူဖောင်းရေချိုး?
အခန်းထဲမှာ jacuzzi ပါတဲ့ Van der Valk ဟိုတယ်မှာတစ်ညအိပ်တည်းခိုပါ >
JACUZZI ရှိအခန်းများ? ငါအဲဒါတွေကိုဘယ်မှာရှာနိုင်လဲ?
ပင်လယ်ပြင်သို့မဟုတ် De Veluwe ရှိဟိုတယ် jacuzzi ကိုသင်ရှာနေသလား။?
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်သင့်အကြိုက်များကိုစီစစ်ရန်လွယ်ကူသည်.
ဤနည်းအားဖြင့်သင်က jacuzzi ရှိဟိုတယ်အခန်းလိုချင်ကြောင်းညွှန်ပြနိုင်သည်.
ဤအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အခန်းတွင်း jacuzzi သို့မဟုတ် whirlpool ရှိသောဟိုတယ်များကိုသာပြထားသည်.
ဤနည်းအားဖြင့်သင်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောအခန်းများ၏ကြည်လင်သောရုပ်ပုံကိုချက်ချင်းရနိုင်သည်, jacuzzi ဟိုတယ်အခန်းကဲ့သို့.
အခန်းထဲတွင် JACUZZI နှင့်တည်းခိုသောဟိုတယ်တစ်ခုတွင်အနားယူပါ
ပျား ဗန်ဒါ Valk အပန်းဖြေဖို့နဲ့အနားယူဖို့ကဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာငါတို့နားလည်တယ်.
jacuzzi ပါ ၀ င်သောဟိုတယ်တစ်ခုတွင်သင်အပန်းဖြေနိုင်သည်.
သင်၏ကိုယ်ပိုင် suite တွင်သင်၏အခန်း၌ကိုယ်ပိုင် jacuzzi ကိုခံစားပါ, သို့မဟုတ်ပတ် ၀ န်းကျင်ကဲ့သို့သောဇိမ်ခံကျန်းမာရေးအဆောက်အအုံများကိုအခမဲ့သုံးပါ, ရေကူးကန်, Sauna ၏ကြံ့ခိုင်မှု.
jacuzzi ပါသောရိုမန်တစ်ဆန်သည့်ဟိုတယ်အခန်းအပြင်အကောင်းကိုခံစားရန်အခြားနည်းလမ်းများစွာရှိသည် (မီနီ) အားလပ်ရက်ခံစားရန်.
ဥပမာအားဖြင့် spa တွင်အပန်းဖြေသောနေ့အကြောင်း?
vd Valk Deals အားလုံးကိုကြည့်ပါ >
ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်အခန်းထဲမှာ jacuzzi နဲ့ငါတို့ဟိုတယ်ကိုပြန်လာတဲ့အခါ, မင်းငါတို့စားသောက်ဆိုင်မှာတိုက်ရိုက်ထိုင်လို့ရတယ်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဟိုတယ်အားလုံးတွင်ကျယ်ပြန့်သော menu ပါသောစားသောက်ဆိုင်ရှိသည်, ထို့ကြောင့်လူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိသည်.
ညစာသုံးဆောင်ပြီးနောက်သင်၏ဟိုတယ်ခန်းသို့ညစာသုံးဆောင်ပြီးနောက် jacuzzi ဖြင့်ပြန်လာနိုင်သည်.
ဤ၌ 10 အခန်းထဲမှာ jacuzzi (သို့) ရေကူးကန်ပါ ၀ င်တဲ့ဇိမ်ခံဟိုတယ်အများစုကိုငါတို့ရွေးပြီးပြီ.
ဒါကမင်းရဲ့အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်း (သို့) အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းနဲ့အတူတူပျော်ပျော်နေတာပဲ(၌) စိတ်အပန်းဖြေညနေခင်းတစ်ခုရဲ့!
ငါတို့မှာထိပ်ဆုံးရှိတယ် 10 အခန်းတွင်း jacuzzi ပါသောဟိုတယ်များသည်သင့်အတွက်ရွေးချယ်ထားသည်.
ဟုတ်ပါတယ်၊ jacuzzi ပါသောကွဲပြားသောဟိုတယ်များအတွက်ပိုကြီးတဲ့ရွေးချယ်မှုရှိတယ်.
ဒီ page ကိုစောင့်ကြည့်ပါ, ကျွန်ုပ်တို့သည်အခန်းနှင့် Jacuzzi ပါသောဟိုတယ်များနှင့်အခန်းများကိုပုံမှန်ထည့်ပေးလိမ့်မည်.
အလွန်တန်ဖိုးကြီးပြီးဇိမ်ကျသည်5* Rotterdam ရှိ Mainport Hotel သည်သင်၏ဇိမ်ခံညအိပ်တည်းခိုရန်စိတ်ကူးကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်.
Mainport Hotel ရှိဟိုတယ်အခန်းများတွင်အခန်း၌ကောင်းသော jacuzzi ရှိသည်.
> များများဖတ်ပြီးစျေးနှုန်းများကိုကြည့်ပါ & ရရှိနိုင်သော
2. VAN DER VALK MIDDELBURG – HOT TUB & အခန်းထဲမှာ SAUNA
Van der Valk ဟိုတယ်များသည်အခန်းထဲမှာ jacuzzi ပါသောဇိမ်ခံ suites များကြောင့်နာမည်ကြီးသည်.
Zo heeft Van der Valk ook een ‘wellness suite’ met bubbelbad, အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံး sauna နှင့်နှစ်ကြိမ်မိုးရေချိုးခြင်း.
3. INTEL HOTELS ART EINDHOVEN - EINDHOVEN
လှပတဲ့ဒီဇိုင်းဟိုတယ်အခန်းထဲမှာတစ်ညလုံးမနေသင့်ဘူး, ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့အခန်းထဲမှာကြီးမားတဲ့ဝိုင်း jacuzzi မှာအနားယူပါ.
'Art Jacuzzi Room' တွင် XL jacuzzi ရှိသည်.
> စျေးနှုန်းများကိုကြည့်ပါ & ရရှိနိုင်သော
4. TOREN HOTEL - AMSTERDAM - အခန်းထဲတွင် HOT TUB
Hotel The Toren ကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံရဲ့အကောင်းဆုံးဟိုတယ်အဖြစ်လေးကြိမ်ထက်မနည်းရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်.
5. ဟိုတယ် REEHORST - EDE
Ede ရှိအထင်ရှားဆုံး Hotel de Reehorst တွင် jacuzzi ပါသောဟိုတယ်များစွာရှိသည်.
ဥပမာအားဖြင့် jacuzzi နှင့်ရုပ်ရှင်ရုံတီဗီဖန်သားပြင်တို့ဖြင့်ဇိမ်ကျသောအခန်းကိုရွေးချယ်ပါ.
7. FLETCHER HOTEL LANGEWOLD - DRENTHE - HOT TUB / အခန်းထဲမှာ WHIRLPOOL
ကောင်းသော Hotel Langewold သည်တောအုပ်၌တည်ရှိသည်.
Hotel suites တွင်အခန်းတစ်ခန်း၌အံ့သြဖွယ်ရေကူးကန် (သို့) jacuzzi ရှိသည်. သက်တောင့်သက်သာနေပါ!
8. VAN DER VALK EMMEN - အခန်းများ
Africa Suite ကိုသင်ရွေးချယ်ပါသလား, Hollywood suite (သို့) အခြားအခန်းအပြင်အဆင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်?
Hotel Villa de Klughte သည်ကမ်းခြေ (သို့) သဲသောင်ပြင်များနှင့်အတူလှပသောနေရာတစ်ခုရှိသည်! Suite များနှင့်သာလွန်ကောင်းမွန်သောအခန်းနှစ်ခုလုံးတွင် A ရှိသည်2ပုဂ္ဂိုလ် jacuzzi.
ကိုယ်ပိုင် jacuzzi ပါသောဟိုတယ်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း?
ကိုယ်ပိုင် jacuzzi ပါသောအချစ်ဟိုတယ်တစ်ခုတွင်သင့်ကိုယ်သင်ပျော်ရွှင်စေပါ.
စိတ်ကူးကြည့်ပါ, ဆောင်းရာသီရဲ့အလယ်, သင်နှင့်သင်ချစ်ခင်သူသည်သီတင်းကျွတ်ပိတ်ရက်အတွက်အဝေးသို့ထွက်ခွာသွားသည်.
မင်းကလှပတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုမှာဝင်ပြီးအပြင်မှာ check out လုပ်ခဲ့တယ်, ချစ်စရာကောင်းတဲ့နွေးထွေးတဲ့ကိုယ်ပိုင် jacuzzi ကမင်းနဲ့သင့်အဖော်ကိုစောင့်နေတယ်.
Op deze pagina vindt u voornamelijk hotels, များစွာသောသို့မဟုတ်အချို့သည်ကိုယ်ပိုင် jacuzzi တပ်ဆင်ထားသည်.
ကိစ္စအများစု၌၎င်းသည်ဇိမ်ခံဟိုတယ်အခန်းတစ်ခုနှင့်သက်ဆိုင်သည် 3- သင်၏နိုင်ငံ၌ကြယ် ၄ ပွင့်ဟိုတယ်.
နေရာအများစုကိုနိုင်ငံရဲ့မြောက်ဘက်မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်, တစ်ညလုံး jacuzzi နဲ့အိပ်လို့ရတဲ့နေရာ.
သင်ပြီးပြည့်စုံသောကျန်းမာမှုအတွေ့အကြုံကိုသွားလိုသလား၊ ပူဖောင်းရေချိုးခန်းပါသောဟိုတယ်အခန်းသည်မလုံလောက်ပါ, ထို့နောက်ပုံမှန်ကျန်းမာရေးဟိုတယ်တစ်ခုတွင်တစ်ညတာအိပ်ချင်ပေမည်.
တိုတိုပြောရရင်, alles is aanwezig voor een super romantisch verblijf. Hieronder staan ​​de 13 populairste hotelkamers met jacuzzi in Nederland.
Tip! Hotel de Wageningse Berg is een aanrader! Of wat dacht u van een vakantiehuis met jacuzzi? အရသာရှိပြီးကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်များစွာရှိသည်.
ဟိုတယ် Stadhouderlijkhof:2suites jacuzzi နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်
နာမည်ကြီးပြီးဇိမ်ခံပစ္စည်း ဟိုတယ် Stadhouderlijkhof Leeuwarden ၏ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည်.
ဤနန်းတော်သည် ၁၈ ရာစုနန်းတော်ဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်အခုတော့နန်းတော်မှာဧည့်သည်တွေရှိနေတယ်. ဒါပေမယ့်တော်ဝင်ဆွဲဆောင်မှုကိုတော့နေရာတိုင်းမှာမြင်နိုင်ပါသေးတယ်, နှစ်ယောက်စလုံးကစားသောက်ဆိုင်မှာ, လှေကားထစ်များအပြင်ခေတ်မီလှပစွာပြင်ဆင်ထားသောဟိုတယ်အခန်းများပါ ၀ င်သောသမိုင်းဝင်ဝင်းအတွင်း. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ယခင်နန်းတော်ထက်မနည်းပါ2ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိ jacuzzi နှင့်သင်အစစ်အမှန်ပိုစတာလေးခုတင်ပေါ်တွင်အိပ်ပျော်သည်! Perfect voor een romantisch weekendje weg.
နံနက်စောစောတွင်စားသောက်ဆိုင် Miami ရှိဇိမ်ခံနံနက်စာဘူဖေးကိုခံစားနိုင်သည်. Zoover အပေါ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်!
Wageningse Berg တွင်ဆူညံနေသည်
စိမ်းလန်းသောအလယ်၌အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုကိုသင်ရှာနေသလား, ထို့နောက် Hotel de Wageningse Berg ကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုနိုင်သည်, Wageningen Berg တွင်တည်ရှိသည်!
ဟိုတယ်တွင်အထူးဒီဇိုင်းရှိပြီး Wageningse Berg ထိပ်တွင်တည်ရှိသောကြောင့်ရေလွှမ်းမိုးခံရသောနေရာများနှင့် Betuwe အပေါ်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမြင်ကွင်းကိုရရှိလိမ့်မည်။.
ရှိပါတယ် (reguliere) အခန်းများ, ဒါပေမယ့်မင်းရှုခင်းနဲ့ Royal suite ကိုလည်းရွေးနိုင်တယ်.
ဤအခန်းတွင်ကြီးမားသောပူဖောင်းရေချိုးခန်းပါ ၀ င်သောဇိမ်ခံပွင့်သောရေချိုးခန်းရှိသည်, သက်တောင့်သက်သာရှိသောကုတင်များနှင့် Gooimeer ၏သာယာလှပသောမြင်ကွင်း.
Tip! Fletcher-Nautisch Kwartier ၏တရားဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှဇိမ်ခံပစ္စည်းအစုံကိုကြိုတင်မှာယူပါ
infrared sauna ပါ ၀ င်သော sauna ပါ ၀ င်သောအိမ်ကောင်းကောင်းတစ်လုံး၏တိတ်ဆိတ်ပြီးသာယာသောနေရာတွင်, မီးဖိုနှင့်လူ ၂ ယောက်ပါသော jacuzzi?
de de Relaxing မှာနေရင်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ကျောထောင့် ..
Ook de hotelkamers zijn prachtig, အထူးသဖြင့်သင်က 'ရေပူစမ်းရှိဟိုတယ်အခန်း' ကိုရွေးချယ်လျှင်.
ဒီမှာဧရာမ jacuzzi ရှိတယ် (1.70 မီတာအချင်း) ပြတင်းပေါက်ရှေ့တွင်ရှိပြီး Rotterdam ၏အတွင်းဆိပ်ကမ်းကိုအလွန်ကောင်းသောမြင်ကွင်းရှိသည်.
walk-in shower နှင့်သီးသန့် sauna ပါ ၀ င်သောရေချိုးခန်းသည်ဤ jacuzzi ပါ ၀ င်သောဟိုတယ်အခန်း၌ကျန်းမာရေးအတွေ့အကြုံကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်.
Fletcher Boutique Hotel Duinoord Wassenaar ၏သဲခုံ၌သာတည်ရှိသည် 15 ကမ်းခြေကနေမိနစ်အနည်းငယ်လမ်းလျှောက်ရတယ်.
သို့သော် Hotel Duinoord ၏ဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်သောala carte စားသောက်ဆိုင်သို့လည်းသွားကြည့်နိုင်သည်!
ကောင်းသောနေ့တစ်နေ့အပြီးတွင် jacuzzi ပါသောအခန်းများ (သို့) ဟိုတယ်အခန်းတစ်ခုတွင်အပန်းဖြေနိုင်သည်.
Tip! Fletcher Boutique Hotel Duinoord ၏တရားဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှဇိမ်ခံသတို့သမီးဝတ်စုံကိုကြိုတင်မှာယူပါ
Maar Van der Valk Breukelen heeft nog meer verrassingen voor u in petto; သင်ဟိုတယ်ရှိအခြားကျန်းမာရေးအဆောက်အအုံများကိုအခမဲ့သုံးနိုင်သည်.
Utrecht နှင့် Amsterdam နှစ်ခုစလုံးကိုအလွယ်တကူရနိုင်သည်ကိုသိရန်ကောင်းသည်.
အပြာရောင်တောက်ပသော jacuzzi ပါ ၀ င်သောဟိုတယ်အခန်း
Van der Valk ဟိုတယ် Arnhem Arnhem အနီးတွင်ရှိပြီး Veluwe သည်လည်းအနီးတွင်ရှိသည်!
ညစာစားပွဲတစ်ခုအတွက်ala carte စားသောက်ဆိုင်မှာထိုင်ပါ.
ယခုမူကားအလှဆုံးဖြစ်သည်, ဇိမ်ခံ 'Glamour Loft'.
စက်မှုလုပ်ငန်း, အနုပညာနှင့်ထူးခြားသည်. ဒါပါပဲ Inntel ဟိုတယ်အနုပညာ Eindhoven ၌, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် Philips ၏ဧရာမစက်ရုံအဆောက်အအုံတွင်တည်ရှိသည်.
စက်ရုံကိုရောက်တဲ့အခါ 1909 တည်ဆောက်ခဲ့သည်, ဤအဆောက်အအုံသည်ရာစုနှစ်တစ်ခုကျော်အကြာတွင် Art Hotel တစ်ခုအဖြစ်တည်လိမ့်မည်ဟုမည်သူမျှမထင်ခဲ့ပေ.
စက်ရုံဟောင်းကိုသင်ခံစားရသည်, ဒါပေမယ့်ခေတ်မီပြီးစိတ်အပန်းပြေဇိမ်ခံကားထဲမှာမင်းကိုယ်မင်းစိတ်ကူးကြည့်ပါ. ဤနေရာတွင်ညအနည်းငယ်သည်ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံဖြစ်ရန်အာမခံသည်.
Tip! Jacuzzi နှင့်လသာဆောင်ပါသောဟိုတယ်အခန်း
Daarna is het heerlijk thuiskomen in de deluxe suite met een kingsize bed, flatscreen တီဗီ, radio en Nespresso apparaat.
Aanbevolen! Fletcher Jagershorst ၏တရားဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှဇိမ်ခံပစ္စည်းအစုံကိုကြိုတင်မှာယူပါ
ဟိုတယ်ခန်းထဲမှာ jacuzzi ပါတဲ့လိပ်စာတွေတောင်ပိုများလာတယ်?
အခြားလူများမပါဘဲငြိမ်းချမ်းသော sauna နှင့် jacuzzi ကိုသင်သုံးလိုသလား, ထို့နောက်ကိုယ်ပိုင်ကျန်းမာရေးလိပ်စာသည်အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်!
ဒီမှာမင်းကစုံတွဲတစ်တွဲအဖြစ်နေမယ်၊ မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိတယ် 100% အာမခံပါသည်.
၎င်းတို့သည်အလွန်သေးငယ်သောလိပ်စာများဖြစ်သည်, သင်နာရီအနည်းငယ်ကြိုတင်မှာယူနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်လည်းတစ်ညအိပ်ပါဝင်ပါတယ်.
နောက်ထပ် Jacuzzi အခန်းများကိုကြည့်ပါ >